Ciyaaraha ugu fiican waayeelka | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Waqtiyada firaaqada
Dhamaanteen waan da 'nahay goor dhow ama ka dib taasna macnaheedu maahan inaan lumino firfircoonida iyo rabitaanka baashaal. Waxaa muhiim ah in dadka waayeelka ah ay sii wadi karaan raaxeysiga maalin kasta si ay u kordhiyaan caafimaadkooda ugana hortagaan cudurada. Hawlahani waa inay noqdaan kuwo wax soo saar leh waana inaad ku sii haysaa firfircoonaan iyo maskax ahaanba. Taasi waa sababta aan ugu talagalnay qodobkaan inaan ogaano waxa ugu fiican ciyaaraha waayeelka.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato mowduucan, kani waa boostadaada.
1 Hawlaha lagu taliyay ee waayeelka
2 Ciyaaraha ugu fiican ee waayeelka
2.1 Ciyaaraha guddiga
2.2 Isaga waan arkaa waan arkaa
2.3 Muxuu urayaa?
2.4 Ciyaaraha xusuusta leh kaararka
2.5 Simon ayaa yidhi
2.6 Go'aami magaca iyo heesta
2.7 Erayo xarrago leh
2.8 Ereyada xujooyinka
2.9 Baal kasta ayaa isku soo xooma
2.10 Qiyaas waxa ay tahay
Hawlaha lagu taliyay ee waayeelka
Way cadahay in dadka waayeelka ahi aysan sameyn karin dhaqdhaqaaq jireed oo la mid ah dhalinyarada. Waa in lagu xisaabtamo in xaddidaaduhu ka weyn yihiin iyo awoodda mootada ee mid waliba sidoo kale. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in loo ciyaaro ciyaaro loogu talagalay dadka da'da ah ee ku habboon xaddidooda iyo awooddooda. Ciyaarahaani waxay lagama maarmaan u yihiin dhammaan heerarka nolosha laakiin si weyn ayaa lagula taliyaa dadka waayeelka ah iyadoo la siinayo waxtarkooda weyn.
Faa'iidooyinka aan u leenahay cayaaraha waayeelka waxaan leenahay kuwan soo socda:
Waxay kobciyaan bulshada
Waa isha madadaalada iyo baashaalka
Waxay wanaajisaa wanaagga iyo isku kalsoonaanta
Waxay hagaajisaa awooda jirka
Dib u dhac gabowga
Jirka firfircoon iyo maskaxda ayaa waqti dheer ku qaadanaya inay sii xumaadaan gabowga awgiis. Waxan oo dhan ha ahaadaan, waxaan sidoo kale ku darnaa nafaqo wanaagsan, waxaan siin doonaa furayaasha lagama maarmaanka u ah si aan awood ugu yeelanno caafimaad inta ugu macquulsan.
Marka xigta waxaan sameyn doonnaa liistada cayaaraha ugu wanaagsan ee waayeelka iyo sharaxaad kooban oo mid walba ah.
Ciyaaraha ugu fiican ee waayeelka
Ciyaaraha caadiga ah ee looxa ee nolosha oo dhan oo dhiirrigeliya is dhexgalka waayeelka in badan oo ka mid ahna waxay dhiirrigeliyaan xariifnimada iyo hal-abuurka Ciyaarahaani waa domino, kaararka, bingo ama ludo. Intaas waxaa sii dheer, waxay heli karaan xoogaa faa iidooyin ah sida firfircoonaanta maskaxda iyo kaqeybgalka bulshada.
Isaga waan arkaa waan arkaa
Waa nooc ka mid ah kuwa ugu yar. Ciyaartan, mid ka mid ah xubnaha kooxda ayaa doorta shay leh warqad gaar ah oo bilow ah. Inta kale ee kaqeybgalayaashu waa inay sheegaan walxaha suuragalka ah ee ay noqon karaan. Qofka doorta sheyga ayaa bixin kara tilmaamo ama ka warbixi kara meesha ay qolka ku jirto. Kan qiyaasa inuu yeelan karo nooc abaalmarin gaar ah si loo siiyo tartan iyo nolol dheeraad ah dabka.
Kani waa nooc kale oo ciyaar ah oo qosol badan siin kara ka qaybgalayaasha. Waxay ku saabsan tahay gelinta walxo iyo walxo taxane ah weel kala duwan. Qof kastaa waa inuu doortaa mid ka mid ah indhaha indhaha waana inuu ku go'aansadaa sheyga udgoonka uu bixinayo. Xadka qalabka walxaha waxaa dejiyay mala awaalkeena si aan u dooran karno kumanaan ficil. Qofka garan kara noocyada urta badankood si uu dhibco ugu kasbado kooxdiisa.
Ciyaaraha xusuusta leh kaararka
Kaliya kuma ciyaari kartid kaararka madaddaalada laakiin ujeedada kaydinta xusuusta. 4 saf iyo 13 tiir ayaa lagu sameysan karaa iyadoo kaararka sagxadda ay hoos u eegaan. Ciyaaryahanku waa inuu ka soo qaadaa labo kaar oo kuwaas ka mid ah khamaarka. Waa in la hubiyaa in lambarrada kaararka ku kala duwan ay kala duwan yihiin iyo in kale. Hadday sidaas tahay, kaararkaas wejiga ayaa loo daayaa mar kale waxayna noqoneysaa ciyaaryahanka kale. Ujeeddada ciyaarta waa in la helo tirada ugu badan ee kaararka lammaanaha oo la go'aamiyo cidda guuleysanaysa.
Simon ayaa yidhi
Ciyaarta noocan ah waxaa lagu ciyaaraa 3 qof ama ka badan. Mid ka mid ah kaqeybgalayaasha ayaa istaaga magaca Simon. Qofkani waa qofka hogaaminaya ficilka. Inta kale ee kaqeybgalayaashu waa inay sameeyaan waxa uu yiri Simon. Xeeladdu waxay ku jirtaa weedha sixirka "Simon Ayaa Yiri." Haddii Simon yiraahdo "Simon wuxuu dhahaa bood," ciyaartoydu waa inay isaga u hoggaansamaan. Taas bedelkeeda, haddii uu keliya yiraahdo erayga "bood" waa inay iska indhatiraan haddii kale waa la baabi'in doonaa.
Go'aami magaca iyo heesta
Si xusuus loogu sameeyo xusuusta waxaa jira ciyaaro loogu talo galay dadka waaweyn oo leh heesaha ugu caansan xilliyadooda. Waxaad ku soo qaadan kartaa hees si kadis ah muddo gaaban. Waxaan geyn doonaa wadar ahaan ilaa 10 heesood kaqeybgalayaashuna waa inay ku qoraan magaca heesta warqad yar. Ku guuleystaha ayaa noqon doona midka ugu badan ee heeso kasta.
Erayo xarrago leh
Mid kale oo ka mid ah kulamada ugu caansan ee waqtiga oo dhan. Waxay ka kooban tahay silsilado ereyo hab ah in dhawaaqa u dambeeya ee eraygu yahay bilowga kan xiga. Waxqabadkan waxaa lagu sameyn karaa kooxo yar yar ama dhowr marxaladood si loogu sameeyo tartamo u dhexeeya kooxaha.
Waxaa la ogyahay in dadka waayeelka ahi noloshooda oo dhan ku maareeyeen maahmaahdii Isbaanishka. Haddii aan ku jirno koox dad ah waxaan dooran karnaa oraahyada ugu caansan oo aan ku kala saari karnaa miiska. Hadafku waa in lagu biiro iyaga oo la sameeyo odhaah dhammaystiran. Kooxda sida ugu dhakhsaha badan u qabata waxay helayaan dhibco waxayna helayaan abaalmarino.
Baal kasta ayaa isku soo xooma
Ciyaartani waa mid fudud laakiin waa xiiso isku waqti. Waxyaabo kala duwan ayaa miiska la saaraa. Waxyaabahani waa inay ahaadaan noocyo kala duwan. Sidan oo kale, kaqeyb galahu waa inuu kooxeeyaa walxaha isla qaybtaas. Waxyaabahani waxay noqon karaan tusaale ahaan: badhamada, badarka, marble, walxaha la qoro, digiraha, iwm.
Qiyaas waxa ay tahay
Ciyaartani waxay kaqeybgalayaasha kaqosol badan. Waa kor u kac ku yimaada koox koox. Wixii uu inkiray ee loo baahan yahay waa bac aan ogolaanayn in la arko waxa ku jira. Waxaan ku soo bandhigi doonnaa shay gudaha qofka waayeelka ah ay tahay inuu qeexo. Qofku kuma eegi karo kaliya taabashada. Kooxda inteeda kale waa inay qiyaasaan shayga ku jira boorsada dhexdeeda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto ciyaaraha ugu fiican ee waayeelka. Ha ilaawin in dadka waayeelka ahi ay firfircoon yihiin wakhti kasta oo ay sii wadaan isdhexgalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Ciyaaraha waayeelka